Shirkii Madaxda IGAD oo lagu heshiiyey in DFS qabato shir lagu dhisayo maamulada Jubooyinka – SBC
Shirkii Madaxda IGAD oo lagu heshiiyey in DFS qabato shir lagu dhisayo maamulada Jubooyinka
(War saxaafadeed, Addis Ababa, 24 May 2013 )Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sh. Maxamuud oo ka qeybalay shirkii Madaxweynayaasha IGAD ayaa halkaas khudbad taariikhi ah ka jeediyey oo uu sheegey in Shirkii 3da May ee madaxda IGAD wax badan qabsoomeen, sida shirkii London 7dii May, xiriirka joogtada ah ee IGAD iyo guddigii IGAD ee booqday Muqdisho iyo Kismayo iyo shirkii maanta ee Wasiirada Arrimaha Dibedda ee IGAD.
Madaxweynahu waxuu soo dhoweeyey go’aankii IGAD ee 3dii May, guddigii IGAD ee booqday Muqdisho iyo Kismayo iyo warbixintii ay maanta hor keeneen shirka IGAD. Madaxweynahu waxuu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay inay xal waara u hesho arrimaha Kismaayo oo uu sheegey inay habboonaan laheyd in shirka Kismaayo ay mar hore maqlaan baaqyadii isdaba jooga ahaa ee ku wajahnaa in shirkaas uu noqdo mid waafaqsan dastuurka, isla markaana ay dowladdu hoggaaminayso iyo in Soomaalida deegaanka ay ka wada qeybgalaan shirka.
Ugu danbeyntii madaxda IGAD waxey isku raaceen in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay Muqdisho ku qabato shir Qaran oo dib u heshiisiin ah oo ay ka soo qeybgalaan Soomaalida deegaanka Jubbooyinka si loo sameeyo maamul ku meel gaar ah oo ka shaqeeya sidii dowlad goboleed waafaqsan dastuurka loo heli lahaa oo ay dowladdu hoggaamineyso.
Madaxda IGAD waxey walaac ka muujiyeen xaalada Kismaayo oo ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay illaaliyaan xasilinooda kana fogaadaan wax walba oo keeni kara colaado hor leh oo bilowda.